विज्ञान कथा | मझेरी डट कम
इथरको बुबा ठुलो अन्तरिक्ष वैज्ञानिक भयो । उनी धेरै मेहनती भएकाले अन्तरिक्ष विज्ञानमा बाहिरि ग्रहसँग कनेक्सन गरेर एकमात्र सुपर वैज्ञानिक बनेर तहल्का मच्चाइरहेका थिए । ऊ अन्तरिक्षका अति विकसित जीवलाई यस पृथ्वीमा पदार्पण गराउन चाहन्थ्यो । यस पृथ्वीमा इथर जब ६ महिनाको भएको थियो, अकस्मात इथरका बुबा “मिराकल ! मिराकल !!” भन्दै दङ्ग प¥यो, उफ्रिन थाल्यो, चुलबुल हुन थाल्यो । वास्तबमा उसको बुबाले जुन सूचना पठाएको थियो, त्यसको सहायतामा उसको बुबालाई अन्तरिक्षयात्रीहरुले यानबाट लिन आएका थिए र सोहीबेला मोटर दुर्घटनामा सम्पुर्ण शरीर भष्म भएर हो वा के भएर हो उसको बुबाको कुनै अंशको रसायन पनि त्यहाँ बाँकी भएको थिएन ।
ksabmagar7 — Fri, 06/02/2017 - 17:43
"समय यात्रा, हजुर समय यात्रा, तपाई हलिउड फिल्म हेर्नुभो भने, रोचक विषय..., अँ, तपाईहरू हेर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ भने विचित्रै, अचम्मै को कुरो छ यो," एकतमासले ती बुढा बोलिरहे,"सम्झदाँ म यहाँ पनि छु, र म यही समयका लागि बनेको, म... म नै भएर पनि फरक हुँ,"हिजो" पनि कतै ब्राह्मणमा बाँचेको छ, बुझ्नुहुन्छ,"भोलि" पनि छ कतै, ती प्रत्येक दिन फाइलमा लेखिए जस्तै हामीभन्दा उपल्ला वर्गका अर्का जात, ती मानिस होइनन्, तिनीहरू राख्दछन् ।" केशर लाइब्रेरीको भत्किएको भित्ताहरू हेर्दै बुढा आँखाँ तेर्साउँदैँ मतिर हेर्छन् । म यी बुढा पनि अङग्रेजी फिल्म हेर्दा रैछन् भन्ने सोच्छु ।
Manoj Bohara — Thu, 08/01/2013 - 07:43
सूर्यको प्रकाश सिधा रुपमा बन्दुकमा परेकाले होला, अचम्मैले चम्किएझै देख्दैछु । यसमा कम्प्युटर चिप जोड्नु पर्ने हुनाले बन्दुक खोलें, त्यसमा भएको टि्रगर निकालेर फाल्दिएँ । मोटरबाट निस्केको तार कम्प्युटर चिपमा जोडिदिएँ । मोटर घुम्दा अंकुसे संगसगै टि्रगरमाथिरहेको स्प्रिङ्ग तानीयोस र बन्दुक पड्कियोस् भनेर एउटा पातलो फलामको अंकुसेको एक भाग त्यस सानो मोटरमा र अर्को भाग उक्त टि्रगर माथिरहेको स्प्रिङमा जोडें ।
ks — Mon, 06/18/2012 - 18:21
युवामञ्च २०६९ जेठ
रोबोटको निधार, छाती, कुम र घुँडामा जडित हरिया, राता र पहेँला बल्बहरू जल्न थाले, पल्याक-पुलुक पल्याक-पुलुक ।
kbs — Sun, 10/16/2011 - 20:26
आकाशमा बादलको छनक एक टुक्रा पनि थिएन । मध्ये भागमा सूर्य झलमलाइरहेको थियो । यद्यपि आङ् सिरिङ्ग पार्ने गरी चिसो हावाको लहर अर्को एक पटक फैलिएर चौर पार गर्दै वरिपरिको पैयुँका रूखमा ठोक्कियो । तिनै पैयुँका रूखहरूबिचबाट कोइलीको आवाज आयो । बसन्त ऋतुको आगमन भैसकेको थियो ।
kbs — Sun, 06/22/2008 - 22:28
"ममी? मेरो ममीलाई के भयो?" यो बालस्वर सुनिनु र उसका आँखा खोल्नु एकै साथ भयो। उसले आफूमाथिको सिलिङ् मा टाँगिएको बत्तीको चहक सहन नसकी आँखा एक पटक आँखा बन्द गरी। अनि नाक र घाँटीको बिचभागबाट बलपूर्वक सास बाहिर फालेर मलिनो आवाज निकाली - "अहँ"। कष्टपूर्वक फेरि आँखा खोली र कौतुहलपूर्वक आँखाका नानीहरु ठुला बनाएर टाउको घुमाउँदै वरपर हेरी। ऊ वरिपरि अग्ला अग्ला दिवारहरुको बिचमा फैलिएको एउटा लाम्चो परेको कोठाको कुनामा ढेपिएको शैय्यामा थिई - एक बिरामी जस्ती लाग्दथी। शैय्यासँग जोडिएको भित्ताको माथिल्लो भागमा घुमिरहेको भेन्टिलेटरको एक तमासको आवाज र बाहिर कोरिडरमा समय-समयमा मान्छेहरु गुन् गुन् बोलेको मधुर स्वरको बिचमा एउटा अपूर्व शान्ति थियो। त्यो शान्ति भङ्ग गर्दै बालिका र एउटा सेतो कोट लगाएको चालीस-पचास देखिने मानिस कुरा गर्दै थिए।
kbs — Sun, 06/22/2008 - 22:27
यो तीस बर्षको बिचमा कति आए, कति गए । विभागका भवनहरू भत्किए, थपिए । प्रत्येक वर्ष अप्रिल महिनामा हाम्रो अफिसमा नयाँ मान्छेहरू भर्ना हुन्छन् ।
तिम्रो अंश हुँ म
कसैलाई तिमी पनि मनपराएर हेर
हरपल याद गर्थिन होला
तिम्रो बास छैन
अँध्यारो पनि उज्यालो लाग्छ
मेरो साधारण जिन्दगी
अन्योल ग्रस्त मायाको संसारमा छु म!!
प्रविधिको जमाना रे अचेल
भाषा–साहित्यमा उदयपुरको चर्चा